अर्जेन्टिनालाई हराएको क्रोएसिया पुग्ला पहिलोपटक फाइनलमा ? इंग्ल्याण्ड कति बलियो छ ? - अर्जेन्टिनालाई हराएको क्रोएसिया पुग्ला पहिलोपटक फाइनलमा ? इंग्ल्याण्ड कति बलियो छ ?
अर्जेन्टिनालाई हराएको क्रोएसिया पुग्ला पहिलोपटक फाइनलमा ? इंग्ल्याण्ड कति बलियो छ ?
नेपालबहस संवाददाता २०७५, २७ असार 77 Views
काठमाडौँ, २७ असार । विश्वकप फुटबलको दोश्रो सेमीफाइनलमा आज राती क्रोएसिया र इंग्ल्याण्ड खेल्दैछन् । खेल राती पौने १२ बजे शुरु हुनेछ । क्रोएसियाले आयोजक रुस र इंग्ल्याण्डले बलियो मानिएको स्वीडेनलाई हराएर फाइनल पुगेका हुन् ।
यी दुई टोलीबीच क्रोएसिया अहिलेसम्म पनि फाइनल पुग्न सकेको छैन । तर इंग्ल्याण्डले यसअघि विश्वकप जितिसकेको छ । तर २८ बर्षयता इंग्ल्याण्ड विश्वकपको सेमीफाइनलसम्म पनि पुगेको थिएन । यसपटक असली रुपमा ह्यारी केनको परीक्षा चलिरहेको छ ।
यता मिडफिल्डर भएर पनि तहल्का पिटिरहेका लुका मोडिक र इभान राकिटिकको खेलले जस्तोसुकै नतिजा पनि निकाल्न सक्छ ।
यसअघि अर्जेन्टिनालाई हराएको क्रोएसियाले इंग्ल्याण्डलाई हराउने क्षमता राखेको छ । फरवार्ड लाइन राम्रो भएको इंग्ल्याण्ड र मिडफिल्डरबाटै गोल हान्ने र डिफेन्स गर्ने क्रोएसियाबीचको बिजेता फाइनलमा फ्रान्ससँग खेल्नेछ ।